Gịnị bụ a National Park: àgwà na mkpa | Green Renewables
Portillo nke German | 21/04/2022 12:00 | Gburugburu
Ọdịdị chọrọ usoro nchebe nke iwu chebere iji chekwaa ahịhịa na anụmanụ. Oghere okike echedoro maka nke a. N'okwu a, ka anyị hụ gịnị bụ ogige ntụrụndụ mba. Nke a bụ ngalaba nchebe dị elu nke na-egbochi ụfọdụ ọrụ mmadụ na mpaghara gbara ya gburugburu.
N'isiokwu a, anyị ga-agwa gị ihe ogige ntụrụndụ mba, àgwà ya na mkpa ya.
1 Gịnị bụ ogige ntụrụndụ mba
2 Ọrụ nke ogige ntụrụndụ mba
3 Mkpa nke National Parks
4 Njirimara nke ogige ntụrụndụ mba
5 Ihe achọrọ maka ụdị
6 akụkọ ihe mere eme nke National Park
N'ikwu ya n'ụzọ ziri ezi, a na-echekwa ha ebe ndị na-enwe ọnọdụ iwu na ikike nke ekpebisiri ike dịka iwu obodo ebe ha dị. Ọnọdụ a na-achọ nchekwa na nchekwa nke ahịhịa na anụ ọhịa ya bara ụba na ụfọdụ njirimara pụrụ iche nke ya, nke na-abụkarị nnukwu oghere na-egbochi mmegharị nke ndị mmadụ. N'ihi na ebumnuche bụ ichebe, chekwaa na igbochi mmebi nke gburugburu ebe obibi ndị bi na oghere ndị a, na njirimara ndị na-enye ha njirimara. Ka ndị ọgbọ n'ọdịnihu nwee ike ịnụ ụtọ oghere ndị a.
Ọrụ nke ogige ntụrụndụ mba
Isi ihe ndị a na-egosi mkpa ọrụ nke ogige ntụrụndụ mba nwere, ya mere gọọmentị emeela mkpebi iwu iji chebe ha.
Chebe ụdị ndụ dị iche iche na gburugburu ebe obibi
Chebe ebe obibi dị ize ndụ
Na-ekwe nkwa ịdị iche iche omenala
Chebe ahịhịa na anụmanụ nọ n'ihe ize ndụ
Chebe gburugburu okike pụrụ iche
Chekwaa ọnọdụ nyocha dị mma
Nchekwa na ichekwa akụkụ nke paleontological
Nchekwa na ichekwa ihe nchekwa ọgba
Zenarị ụdị ịzụ ahịa n'ụzọ ezighi ezi
Zere mmepe nke ukwuu
Mkpa nke National Parks
Mkpa ogige ntụrụndụ mba nwere ike ịmalite site na nchekwa na ichekwa ebe obibi ya na gburugburu ebe obibi ya ma ọ bụ njirimara pụrụ iche nke ahịhịa na anụ ọhịa ya. Ha na-enye aka dị ukwuu na nguzozi ndu, n'ihi na ha bu n'obi ichebe ụdị osisi na anụmanụ ndị na-ahụkarị ma ọ bụ pụrụ iche na mpaghara ndị a. Ma e nwere ihe ọzọ aku na uba mkpa, ọbụna mba, na anyị ga-ahụ n'oge na-adịghị.
Ọgbọ mbata: Kwa ụbọchị, ha na-ebute nnukwu ego na mba maka echiche dị ka njem njem na ihe omume njem, ebe ịma ụlọikwuu, ịrị ugwu na ihe ndị ọzọ.
Mepụta akụrụngwa okike enwere ike imeghari: Ọtụtụ ogige ntụrụndụ nke mba nwere nnukwu ikike maka akụrụngwa mmeghari ohuru, gụnyere imepụta mmiri na ezigbo osisi, a na-achịkwa mmepụta ha.
Nchekwa akụ ndị sitere n'okike: Ụdị ebe ndị a na-echebe na-emekarị ka ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị bi n'ụwa kwụsie ike ihu igwe, na-enyere aka mee ka ihu igwe dị jụụ, ala na ụfọdụ mmetụta nke ọdachi ndị na-emere onwe ha.
Dị ka anyị hụworo, mkpa ogige ntụrụndụ eke echedoro dị oke mkpa ma dị mkpa maka nlanarị nke mba na ụwa dum, yana ụwa anyị.
Ọ bụ ezie na nzukọ ụwa emewo mgbalị dị ukwuu ichebe ihe ndị sitere n'okike, ọ na-eche nnukwu ihe egwu ihu. Ọnụ ọgụgụ buru ibu nke anụ ọhịa nọ na ọnọdụ adịghị ike, na a na-eme atụmatụ na pasent 50 apụọla n'anya n'ime afọ 40 gara aga, nke ka ukwuu n'ihi ịzụ ahịa n'ụzọ iwu na-akwadoghị na nrigbu.
Njirimara nke ogige ntụrụndụ mba
Ogige ntụrụndụ mba ga-enwerịrị njirimara ụfọdụ a ga-ewere dị ka ogige ntụrụndụ mba, ọ ga-enwerịrị uru eke dị elu, njirimara pụrụ iche na otu ihe dị iche iche nke ahịhịa na anụmanụ. O kwesịrị ịnata nlebara anya na nlekọta pụrụ iche site n'aka gọọmentị.
A ga-akpọwa ogige ntụrụndụ mba ma ọ bụ nchekwa mba, ga-enwe ihe nnọchianya eke usoro. Mpaghara buru ibu nke na-enye ohere ka evolushọn sitere n'okike nke usoro ihe ndị dị ndụ na obere ntinye aka nke mmadụ na uru okike ya, ya mere ọ dị mkpa ịmara ihe ogige ntụrụndụ mba bụ iji nye ha nlezianya kwesịrị ekwesị.
Ha abụrụla ebe mgbaba ikpeazụ nke ụdị ndị nọ n'ihe ize ndụ ugboro ugboro. Ha bara ọgaranya n'osisi na anụ ọhịa ma nweekwa usoro ọdịdị ala pụrụ iche. Ọ ghaghị inye ohere maka nguzozi n'okike nke ndụ dị ka ọ dị na mbụ na mbara ala anyị. Ebumnuche nke ọtụtụ n'ime ogige ntụrụndụ ndị a bụ ichekwa anụ ọhịa na ịmepụta ebe ndị njem nlegharị anya, na ecotourism ka a mụrụ n'okpuru echiche a.
Ihe achọrọ maka ụdị
Maka mpaghara ma ọ bụ ókèala a ga-atụle n'ime ogige ntụrụndụ mba, ọ ga-enwerịrị ụfọdụ njirimara ndị a, nke ekwesịrị ịkọwapụta ebe ọ bụ na ha nwere ike ịdịgasị iche dịka iwu ma ọ bụ iwu nke obodo ụfọdụ siri dị:
Nnọchite anya: Ọ na-anọchi anya usoro okike nke o nwere.
Mgbasawanye: Nwee elu zuru oke iji kwe ka evolushọn okike ya, na-ejigide àgwà ya na ịhụ na arụ ọrụ nke usoro ihe ndị dị ugbu a.
Ọnọdụ nchekwa: Ọnọdụ okike na ọrụ gburugburu ebe obibi bụ nke kachasị. Ntinye aka mmadụ na ụkpụrụ ya ga-abụrịrị ụkọ.
Ọganihu mpaghara: N'inwere ike ịwepụ, ókèala ahụ ga-abụrịrị nke na-aga n'ihu, enweghị oghere na enweghị nkewa nke na-akpaghasị nkwekọ nke gburugburu ebe obibi.
Ebe obibi mmadụ: Ewepụla ụlọ ime obodo ndị mmadụ bi, na-enweghị ndị ezi omume.
Nchedo iwu: iwu na usoro iwu obodo gị ga-echekwarịrị
Ikike nka Nwee ndị ọrụ na mmefu ego iji zute ebumnuche nchekwa na nchekwa, na-ahapụ naanị nyocha, mmemme mmụta ma ọ bụ ịma mma.
Nchedo n'èzí: Gburugburu mpaghara enwere ike ịkpọpụta nchekwa mba ofesi.
Ndị na-ahụ maka ogige na-echekwa ogige ntụrụndụ mba ka ọ ghara igbochi omume iwu na-akwadoghị dị ka nrigbu ụdị anụrị ma ọ bụ ịzụ ahịa iwu na-akwadoghị. Ụfọdụ ogige ntụrụndụ mba nwere ike ịbụ nnukwu mpaghara ala, mana enwerekwa nnukwu mmiri, ma n'oké osimiri ma ọ bụ n'ala nke dabara n'ime ogige ntụrụndụ mba kwuru. E nwere ọtụtụ ihe atụ ndị dị otú ahụ n’ụwa.
akụkọ ihe mere eme nke National Park
Ọ bụ ezie na ọ bụghị echiche dị ka anyị si mara ya taa, e nwere ihe ndekọ nke ebe nchekwa ihe okike ọbụna ochie na Asia, nke ọhịa Sinharaja dị na Sri Lanka gosipụtara, bụ nke gosipụtara. E kwuputara ya na saịtị UNESCO World Heritage Site tupu 1988.
Ọ bụghị ruo n'afọ 1871, site na ịmepụta Yellowstone National Park na Wyoming, ka a mụrụ ogige ntụrụndụ mbụ nke mba. Dịka ọmụmaatụ, e kere ogige Yosemite na 1890, n'otu obodo ahụ na United States.
Na Europe, echiche nke ogige ntụrụndụ mba amalitebeghị imejuputa ya ruo 1909, mgbe Sweden kwadoro iwu na-enye ohere nchebe nke ebe itoolu buru ibu. Spain ga-akwado nguzobe nke ogige ntụrụndụ mba na 1918 kere ogige mba mbụ ya, Ogige Ogige Mba nke Ugwu Europe.
Ugbu a onye ọ bụla doro anya ihe ogige ntụrụndụ mba na ihe ọrụ ha bụ, e nwere ogige ntụrụndụ mba, nke dị na Latin America na-ewe ihe dị ka otu ụzọ n'ụzọ anọ nke ókèala ahụ, dị ka Maya Biosphere Reserve na Guatemala, ọbụna Pegaso na Argentina Rito Moreno Glacier National. Park.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere ihe ogige ntụrụndụ mba, àgwà ya na mkpa ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Gburugburu » Gịnị bụ ogige ntụrụndụ mba
Nkwado: ngwaahịa maka ịchekwa ike, mmiri na akụrụngwa